I-CrockPot Beef Stew - Ungadliwa
Ngingawathenga kuphi amagxolo e-peppermint
amakhowe agxishiwe ngomhlabathi wenkomo noshizi kakhilimu
Ngingasebenzisa isipinashi esisha esikhundleni seqhwa
inkukhu isobho le-noodle nemifino exubile
I-CrockPot Beef Stew
I-CrockPot Beef Stew kungenye yezidlo engizithandayo zokupheka njalo. Iyagcwalisa futhi iyanambitheka ngamanoni amathenda enkomo, izaqathe, amazambane nophizi (noma ubhontshisi oluhlaza). Uma kukhulunywa ngokudla okunethezeka kokunethezeka, umpheki ophuza inyama yenkomo ungcono kakhulu!
Ukuqedela ukudla, konke okudingeka ukwenze nje ukufaka uhlangothi lwe amabhisikidi alula webhotela noma isinkwa sommbila Ama-muffin agcwele ibhotela. Noma, yiphake ngesinkwa esikhulu esenziwe ekhaya sokufaka i-gravy. Wonke umuntu uzobe esezulwini!
ukuthi yikuphi ukushisa okufanele kuphekwe izimbambo
Izithako zeSlow Cooker Stew
Izithako zalesi iresiphi yenkomo i-CrockPot iresiphi yenkomo yenkomo noma inyama yenkomo, izimpande zemifino ezinjengamazambane, izaqathe kanye nophizi namabhontshisi.
Inyama enhle yokwenza isitshulu senkomo i-chuck steak! Kuzodingeka usike ube ngamacube ngokwakho. I-Chuck iyinyama enzima, kodwa egcwele ukunambitheka evela emahlombe kanye nasekugcineni kwesilwane. Ilungele iCrock Pot Beef Stew noma imbiza eyosiwe (ukuthungwa okufanayo nehlombe lengulube elisetshenziselwa ukwenza I-Crock Pot Pot Ingulube Edutshiwe ). Igcina ukunambitheka kwayo okunothile, okunenkomo futhi iba mnandi futhi ithenda imfoloko ngaphansi kokushisa okuphansi nokuhamba kancane kwembiza.
I-Slow Cooker Beef Stew ekhangayo: Okwenza isitshulu kube yisitshulu amakhambi anambitheka, umhluzi wenkomo ojiyile nesinongo. Ukuze unikeze isidlo kube yinkimbinkimbi ngokwengeziwe, cabanga ngokwenza isitshulu senkomo seCrockPot ngewayini elibomvu. Faka inkomishi yewayini elomile elinenhliziyo enhle, njengeCabernet Sauvignon noma iMerlot ngenkomishi yomhluzi wenkomo bese uyisebenzisela ukushisa ipani obelilisebenzisa ukufaka brown inyama. Ungangeza nakwamanye amakhowe ezinkinobho.
Indlela Yokwenza I-Beef Stew ku-Crock Pot
Ngenkathi sithanda ukwenza i- isitofu esijwayelekile esiphezulu senkomo yenkomo , le iresiphi yokupheka yokupheka elula ingashiywa ipheka ngenkathi uqhubeka nosuku lwakho! I-Crock Pot yenkomo yenkomo ihlangana ndawonye ngezinyathelo ezimbalwa ezilula futhi inyama yenkomo iba nethenda.
indlela yokupheka imfanzi lo mein
Phonsa inyama yenkomo kumxube we-powder-garlic ukuze ugqoke, futhi ube nsundu kumafutha omnqumo ngamaqoqo. Ungagcini ipani. (Ungeqa lesi sinyathelo kepha i-browning ingeza ukunambitheka okuhle kusitshulu).
Songa u-anyanisi epanini elifanayo (sebenzisa umhluzi noma iwayini elibomvu ukusiza ukugcoba futhi ungeze noma yiziphi izingcezu ezibomvu embizeni yakho).
Faka konke kumpheki ohamba kancane (ngisebenzisa i- 6qt imbiza ) bese upheka kuze kube yilapho inyama yenkomo ithambe. Hlanganisa uphizi ngaphambi kokukhonza.
Kuzoze kube nini ukupheka isitshulu senkomo ku-Crock Pot: Isitshulu senkomo se-Crock Pot siyisidlo sokusetha-futhi-ukhohlwe-ukudla. Yipheke phezulu amahora angama-4-5, noma phansi ngama-8-9 kuze kube yilapho inyama ithambile. Ungayishiya ifudumele ihora elengeziwe noma uma kudingeka.
Ukuqinisa Isitshulu Senkomo Embizeni Yezinkukhu: Ngisebenzisa i-cornstarch slurry (izingxenye ezilinganayo zesitashi namanzi) bese ngiyifaka ekugcineni. Vumela ukuthi ipheke cishe imizuzu eyi-10 ngemuva kokufaka i-slurry ukuqeda noma yikuphi ukunambitheka kwesitashi.
Siphaka isitshulu senkomo ngesinkwa esinoqweqwe noma imiqulu eyenzelwe ekhaya lesidlo sakusihlwa!
I-Leftover CrockPot Beef Stew
Izinsalela zizogcina cishe izinsuku eziyi-3-4 efrijini.
Ungakwazi yini Ukuqhwaza I-Beef Stew: Uyokujabulela futhi ukwazi ukuthi iCrockPot Beef Stew iqina kahle impela, ngakho-ke yenza okuningi ngalabo busuku bokulungisa ukudla okusheshayo. Shiya cishe i-intshi yesikhala senhloko ukuze unwetshwe ezitsheni zepulasitiki, futhi isitshulu sakho sizogcina izinyanga ezine efrijini.
Inkukhu Stew - intandokazi yendodakazi yami
Okusheshayo Embizeni Yenkomo Stew - kulula kakhulu
Inkabi Stew Recipe - zakudala
I-Lamb Stew (i-Irish Stew) - inhliziyo!
Isobho Lenkomo Yenkomo - iphilile futhi imnandi
I-Crock Pot Beef Stew
Isikhathi sokulungiselelaamashumi amabili imizuzu Isikhathi Sokupheka4 amahora Isikhathi Esiphelele4 amahora amashumi amabili imizuzu Izinkonzo6 izinsizakalo UmbhaliUHolly Nilsson ICrockPot Beef Stew ingesinye sezikhathi engidla ngaso njalo ebhodweni elilodwa engilithandayo. Iyagcwalisa, imnandi, umndeni uyayithanda njalo, futhi kulula ngendlela emangalisayo ukuyilungiselela kusengaphambili. Phrinta Phina
▢ezimbili amakhilogremu inyama yenkomo noma ukupheka inyama yenkomo
▢3 wezipuni ufulawa
▢½ isipuni impuphu kagalikhi
▢3 wezipuni Amafutha e-Olive
▢1 u-anyanini oqoshiwe
▢1 inkomishi ijusi yemifino njenge-V8
▢4 izinkomishi yenkomo umhluzi
▢1 isipuni Isoso laseWorcestershire
▢½ isipuni i-thyme noma ama-sprigs ama-2 amasha
▢1 isipuni i-rosemary eyomile noma i-1 sprig entsha
▢3 izinkomishi amazambane ehlutshiwe futhi cubed
▢ezimbili izinkomishi izaqathe uthathe izingcezu eziyi-1 intshi
▢1 inkomishi izingongolo zesilimo esidliwayo esinamagatsha anamanzi uthathe izingcezu eziyi-1 intshi
▢¾ inkomishi uphizi
▢ezimbili wezipuni ummbila
▢ezimbili wezipuni amanzi
Hlanganisa ufulawa, i-garlic powder nosawoti & pepper ukunambitha. Phonsa inyama yenkomo ngxube kafulawa.
Brown inkomo no-anyanisi emafutheni omnqumo amaqoqo amancane. Faka omunye umhluzi epanini bese uhlikihla noma yiziphi izingcezu ezinsundu.
Faka zonke izithako ngaphandle kophizi kanye ne-cornstarch ku-6QT cooker slow.
Pheka ngamahora aphezulu angama-4-5 noma ngamahora aphansi ayi-8-9 noma kuze kube yilapho inyama yenkomo ithenda.
Hlanganisa ummbila namanzi wezipuni ezi-2. Faka isitshulu kancane ngesikhathi sokujiya (ungahle ungadingi yonke ingxube). Faka uphizi.
Vala bese upheka imizuzu eyi-10. Isizini ngosawoti nopelepele.
Amakholori:480,Amakhabhohayidrethi:29g,Amaprotheni:36g,Amafutha:24g,Amafutha agcwalisiwe:8g,Cholesterol:104mg,I-Sodium:503mg,Potassium:1622mg,Umucu:5g,Ushukela:5g,Uvithamini A:7545IU,Uvithamini C:31.4mg,I-calcium:94mg,Insimbi:7.6mg
Igama elingukhiyei-crockpot yenkomo yenkomo InkamboInkomo, Inkambo Eyinhloko, I-Slow Cooker KuphekiweWaseMelika© SpendWithPennies.com. Okuqukethwe nezithombe kuvikelwe i-copyright. Ukwabelana ngale recipe kuyakhuthazwa futhi kuyaziswa. Ukukopisha kanye / noma ukunamathisela izindlela zokupheka ezigcwele kunoma iyiphi imithombo yezokuxhumana akuvunyelwe nakancane. Sicela ubuke inqubomgomo yami yokusebenzisa izithombe lapha .